Saraakiil Mareykan ah oo ku dhintey burbur diyaaradeed oo ka dhacay Jibuuti (sawiro) – SBC
Saraakiil Mareykan ah oo ku dhintey burbur diyaaradeed oo ka dhacay Jibuuti (sawiro)
Taliska ciidamada Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday dhimashada afar sarkaal oo Mareykan ah oo uu ku dhintey burbur diyaaradeed oo ka dhacay wadanka Jibtuuti.
Diyaaradan oo aheyd nooca rayidka ee loo yaqaan U-28A ee matoorka ku leh sanqada ama gafoorka hore ayaa ku burburtey meel lix mile u jirta saldhiga ciidamada Mareykanku ku leeyihiin dalka Jibuuti ee lagu magacaabo Camp Lemonnier.
Shilkan ayaa la sheegayaa in uu dhacay habeenimadii sabtida saacada afrikada bari markii ay aheyd 8-dii fiidnimo, waxaana la sheegay in diyaaradan ay hawlo sirdoon wadey isla markaana ka timid wadanka Afgraanistan.
Saraakiisha shilkan diyaaradeed ku dhintey ayaa lagu kala magacaabaa Captain. Ryan P. Hall, oo 30 sano jir kana soo jeeda magaaladf Colorado Springs ee gobolka Colorado isla markaana ka tirsan cutubka 319 Special Operations, Captain. Nicholas S. Whitlock, oo 29 sano jir ah kana soo jeeda magaalada Newnan ee gobolka Georgia, isla markaana ka mid ah cutubka 34 ee Special Operations Squadron, 1st lutinent. Justin J. Wilkens oo 26 sano jir ah oo ka soo jeeda magaalada Bend ee gobolka Oregon,kana ka mid ah cutubka 34th ee Special Operations Squadron iyo Senior Airman Julian S. Scholten, oo 26 sano jir oo ka oo jeeda magaalada Upper Marlboro, ee gobolka Maryland, kana mid ah qaybta 25th Intelligence Squadron ee dhanka sirdoonka qaabilsan.
Ryan Whitney oo ka mid qaybta 1-aad garabka hawlgalada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in uu socdo baaritaan ku aadan burburka diyaarada, waxaase uu meesha ka saarey in ay diyaaradu u dhacdey sabab weerar, isagoo sheegay in diyaaradu ay ku hawlnayed hawlo dhanka sirdoonka ah iyo ilaalo.
Amy Oliver oo ah sarkaalka u qaabilsan arimaha dadweynaha ciidamada cirka Mareykanka guutada 1-aad garabka hawlgalada gaarka ah ayaa sheegay in diyaaradan ay ka soo laabatey hawlgal ay ka wadey wadanka Afgaanistaan.
Saldhiga Camp Lemonnier ee Mareykanku ku leeyihiin dalka Jibuuti ayaa ah kan ugu weyn Afrika waxaana ay halkaasi ka wadaan hawgalo kala duwan oo ku jihaysan wadamada Yemen, Soomaaliya iyo badweynta Hindiya.
SBC International Djibouti